ပညာရေး | asnthanhan's Blog
Posted by asnthanhan under နည်းပညာ, ပညာရေး, လူမှုရေး
မိမိရဲ့ facebook နောက်ခံဒီဇိုင်းတွေကို မိမိကြိုက်တဲ့ရုပ်ပုံတွေထည့်ပြီး လှပအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?မသိကြသေးသူများအတွက် ရေးလိုက်ရပါတယ်၊ စ်ိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်နော်…
Page Rage ဆိုတဲ့ Website ကို ၀င်ပြီး Member အဖြစ်အသင်းဝင်ရပါတယ်၊ free and Premium ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပါတယ်၊ ကြိုက်တာယူလို့ရပါတယ်၊
ဆော့ဝဲတွေကို IE သို့ Chrome တွေမှာ install လုပ်လို့ရပါတယ်၊ install လုပ်နေချိန်မှာတော့ ကျန်တဲ့ တက်နေတဲ့တခြား internet Explorer တွေပိတ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်၊ တခါတရံ Chrome မှာ Error တက်နေတတ်တာကြောင့်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ အားလုံးကိုတော့ install လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊ မကြိုက်တတ်တဲ့ တချို့ဟာတွေကို ဥပမာ- Toolbar တွေကို Install လုပ်စရာမလိုပါဘူး၊
ပထမဦးဆုံး Create you own မှာ ကာလာရွှေးရပါတယ်၊ ကာလာတွေကိုမကြိုက်ရင် ပေးထားသော Browse ဆိုတဲ့ နောက်ခံဒီဇိုင်းပုံအစုံတွေ(Car,Animal,fashion, Cute, Love, Floral, Emo, Holiday,Militry,Music,NatureMoive,Motocycle,Food,Catoon, Dark,Color, Custom, Anime…. အစရှိသော Layout များနှင့် မိမိရဲ့စိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းပုံတွေလဲ ရွှေးလဲရပါတယ်၊ ပြီးရင် မိမိရွှေးထား သောနောက်ခံပုံတွေကို intsall လုပ်ပေးရပါတယ်၊ မကြိုက်သေးရင်လဲပြန်ဖျက်ပြီး ကြိုက်ရာချိန်းလို့ရပါတယ်၊ ဘာမှမခက်ပါဘူး?
ဒါကကျွှန်တော်ရဲ့စ်ိတ်ကြိုက် Piglet ပုံတွေပါ၊(မှတ်ချက်-ကျွှတ်တော်ရဲ့နောက်ခံပုံတွေ တော်တော်များ Piglet ပတ်သက်တဲ့ ပုံတွေဘဲ တင်ပါတယ်၊ သားက၀က်နှစ်မှာမွှေးလို့လေ..ဟဲဟဲ!)
ကဲ! စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးနော်! ဘယ်တွေလဲဆိုတာကို ဒီမှာဝင်ကြည့်လိုက်ပါအုံး>>>Page Rage Installer
အိုင်းစတိုင်း၊ စတီဖင်ဟော့ကင်း တို့နှင့် ဉာဏ်ရည် မကွာတဲ့ လေးနှစ် သမီးလေး
Posted by asnthanhan under ထူးခြားအံ့ဘွယ်သတင်း, ပညာရေး, အထူးသတင်း
မောက္ခနိုင်ငံတကာသတင်း-Wednesday, 09 May 2012 10:18 -၀င့်ထန်း
အင်္ဂလန် ၀င်ချက်စတာမြို့မှ ဟိုက်ဒီ ဟန်ကင်းစ် (Heidi Hankins) အမည်ရှိ ၄ နှစ်သမီးလေးရဲ့ ဉာဏ်ရည်ပြကိန်း (IQ) မှာ ၁၅၉ ရှိပြီး ရူပဗေဒအကျော်အမော် အဲလ်ဘတ် အိုင်စတိုင်းနှင့် စတီဖင်ဟောကင်း တို့ထက် ၁ မှတ်သာ နိမ့်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ဟိုက်ဒီ ဟန်ကင်းစ် ကို အင်္ဂလန်ရှိ ကမ္ဘာ့အိုင်ကျူအမြင့်ဆုံးသူများ အဖွဲ့ Mensa International က ဉာဏ်ရည်မြင့် ကလေးအဖြစ် အတည်ပြုပြီး အဖွဲ့ဝင်သစ်အဖြစ် လက်ခံလိုက်သည်။
ဟိုက်ဒီ က အသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာပင် အသက် ၈ နှစ် အရွယ်တွေ ဖတ်သော စာများကို ဖတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများကို အိုင်ကျူ စနစ်တကျ စမ်းသပ်မှု လုပ်လေ့မရှိသော်လည်း၊ ယခု Mensa အဖွဲ့က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ မေးခြင်းဖြင့် ဟိုက်ဒီ ဟန်ကင်းစ် ရဲ့ အိုင်ကျူကို အတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
“ဟိုက်ဒီ က အချိန်တွေ၊ နေရာတွေ၊ သာမန်လူတွေ သတိမထားမိတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို မှတ်မိလွယ်တယ်၊ မှတ်ဉာဏ်အရမ်း ကေင်းတယ်” ဟု သူ့ဖခင်က the Star သတင်းစာကို ပြောပြသည်။
ဟိုက်ဒီ တစ်ဦးထဲသာ အိုင်ကျူမြင့်သူ မဟုတ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကလည်း Oscar Wrigly ဆိုသည့်ကလေးသည် အသက် ၂ နှစ်အရွယ်မှာ အိုင်ကျူ ၁၆၀ ရှိခဲ့ပြီး Mensa အဖွဲ့တွင် အသက် အငယ်ဆုံးဖြင့် ကမ္ဘာ့အိုင်ကျူ အမြင့်ဆုံး စံချိန်ချိုးခဲ့သည်။
သာမန်လူတွေရဲ့ ပျမ်းမျှ အိုင်ကျူမှာ ၁၀၀ ခန့် ရှိသည်ဟု Mensa International ဉာဏ်ကြီးရှင် အဖွဲ့က ဆိုသည်။
Source: Time & Huffington post
Posted by asnthanhan under ပညာရေး, အထူးသတင်း
Scholarships စကောလားရှစ် နှင့်ပတ်သက်သောဝိပ်ဆိုဒ်လေးတခုကိုတွေ့မိလို့ ငယ်ရွယ်သောလူငယ်တွေအတွက် အလွန်အရေးကြီးတာကြောင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မြန်မာပြည်မှာ လူတော်တော်များမသိကျသေးတာတွေ့ရလို့ပါ၊ အသိတယောက်ရဲ့သမီးတယောက်နှင့်တခြားမြန်မာ လူငယ်တွေ အနည်းငယ်တွေ့ Scholarships စကောလားရှစ်တွေ ရနေပြီဆိုကိုလဲတွေ့ရလို့ဘဲ၊ မြန်မာလူငယ်တွေက စာကျက်အားသာနေသာကိုး!ဒါကလူငယ်တွေရဲ့ဘာဝတသက်လုံးနှင့်ဆိုင်တဲ့အတွက်ဘဲ! ကျောင်းအတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ ပေးထား တော့ မြန်မာလူငယ်တွေ အဆင်ပြေနေကျတာတွေရပါတယ်!
ကဲ! စိတ်ဝင်စားရင် ကြိုးစားကြည့်လိုက်ပါအုံးမြန်မာ့လူငယ်တွေ?
About Us Contact Us Glossary Site Map
Getting Started » Introduction Study Levels » Foundation Courses Diplomas
Associate Degrees Bachelor Degrees Master Degrees Master of Philosophy Degrees
PhD Degrees Postgraduate Diplomas Exams » English Exams » TOEFL IELTS CAE
Equivalence Exams » GED IGCSE SAT ACT GRE GMAT LSAT MAT MCAT LCCI ABE
Recommended Courses » Introduction Agriculture & Environment Art & Music Business & Management Communication & Media Computers & IT Education Engineering & Architecture Health Humanities & Social Science Law Science & Technology
Schol. for Myanmar students (A-I) »
Schol. for Myanmar students (J-Z) »
Miriam College – Prospect Burma
Pannasastra Uni Scholarships
Yunnan University Scholarship
Scholarships for any students »
Scholarships by subject »
Central & South America »
Canada & United States »
Welcome to Myanmar Study Abroad (MSA)
This website provides information about scholarships, universities, and recommended courses for students from Myanmar (Burma) who aspire to study atauniversity abroad.
Chat anonymously with Student Support – Click the link below!
Takealook at the links below which contain new, updated, or other important information.
APPLY NOW FOR THE HEINRICH BOLL STIFTUNG SCHOLARSHIP
The Heinrich Boll Stiftung Southeast Asia scholarship is now accepting applications from students from Myanmar (Burma) to pursue Master’s degrees at selected universities in Thailand! Please click the link above for more information about the programs available and the eligibility requirements. The application deadline is 31 Jan 2012 or 31 Mar 2012, depending on where you intend to study.
APPLY NOW FOR THE CHEVENING SCHOLARSHIP
The Chevening scholarship from the British government is now accepting applications from students from Myanmar (Burma) to pursue Master’s degrees at universities in the United Kingdom! Please click the link above for more information about the eligibility criteria, application procedure, etc. The application deadline is 17 Feb 2012.
APPLY NOW FOR THE PROSPECT BURMA (PB) SCHOLARSHIP
The Prospect Burma (PB) scholarship is now accepting applications. The eligibility criteria can be found within the application form and guidance notes, but the scholarship can be used by students from Myanmar (Burma) to pursue Bachelor’s, Master’s, or PhD degrees at universities around the world! The application deadline is 15 Mar 2012.
APPLY NOW FOR THE UNITED WORLD COLLEGE (UWC) INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA SCHOLARSHIP
The United World College (UWC) is now accepting applications from high school students from Myanmar (Burma), ages 16-19, to apply forascholarship to study an International Baccalaureate (IB) diploma in Hong Kong or the United Kingdom! The application deadline is 17 Feb 2012.
APPLY NOW FOR THE SUPPLEMENTARY GRANT PROGRAM ASIA (SGPA) SCHOLARSHIP
The Supplementary Grant Program Asia (SGPA) scholarship is now accepting applications. The eligibility criteria can be found within the application form, but the scholarship can be used by students from Myanmar (Burma) to pursue Bachelor’s, Master’s, or PhD degrees at universities around the world! The application deadline is 15 Mar 2012 or 15 May 2012, depending upon where you intend to study.
EXAM PREPARATION OUTREACH PROGRAM (EPOP) »
Do you need help studying and preparing for university entrance exams such as TOEFL, IELTS, and GED? Check out EPOP for free diagnostic testing, exam preparation, and more!.
SPOTLIGHT ON ASIA »
Find out why studying in Asia may be the smartest choice you make! Here are some great reasons why you should consider Asia first.
TIPS FOR SUCCESS »
How will you be evaluated while studying abroad? What is academic misconduct? What is “culture shock”? Learn the answers to these questions and more, and you’ll becomeamore successful student at university!
(c) 2010 Myanmar Study Abroad is proudly powered by WordPress | Webdesign by bordermedia
အင်တာနက်ပေါ်က ဈေးချိုသောဈေးဆိုင်များ အပိုင်း(၁)
Posted by asnthanhan under စီးပွားရေး, နည်းပညာ, ပညာရေး, ငွေကြေး
Cheaply online books shop!
Online ကနေ ဈေးပေါတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို လမ်းညွှန့်လိုက်ပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံတကာကထုတ်တဲ့ မူရင်းစာအုပ်ကောင်းတွေက ဈေးက အားကြီးလွန်းလို့ $ ဂကဏာန်း ၃ လုံး အနည်းဆုံး ရှိလို့ တော်ရုံတန်ရုံနှင့် မ၀ယ်ယူနိုင်ကျပါ ဘူး! ဒါကြောင့် လိုချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ၀ယ်ချင်ရင်ဈေးသက်သက်သာသာနှင့် အဆင်ပြေ အောင်လို့ အသိပေးရတာပါ၊
ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြောနေရလဲဆိုတော့ နိုင်ငံခြားမှာနေပြီး စာတွေမဖတ် ဘာမှဆက်မလေ့လာရင် ခေတ်နောက်ကျကျန်ခဲ့မှာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါဘဲ၊ အဓိက IT ပညာရှင်တွေဆိုပိုဆိုးပါတယ် နှစ်တိုင်း နည်းပညာတွေ အသစ်တွေတောက်လျှောက်ထွက်တော့ ဘာမှဆက်ပြီးမလေ့လာရင် ပြတ်ကျန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်၊ New Version တောက်လျှောက်ဆိုတလို ထွက်နေတာပါဘဲ! စီးပွားရေးအရပြိုင်နေသလို အဲ ထွက်လိုက်တာမှ ဟိုကဒီက…….
ဒီလိုထွက်တိုင်းလေ့လာဝယ်ဖတ်ရရင် မူရင်းစာအုပ်ဖိုးနှင့် မွဲနိုင်ပါတယ်! ဒါကြောင့်ဈေးသက်သက်သာသာ နှင့်ရနိုင်သော အခု Website တွေက အပေါင်းသင်းတွေအတွက်အကျိုးရှိလိမ့်မယ်တင်တယ်နော်!
အဲ!အရေးကြီးတာမေ့နေလို့? အော်ဒါမှာတာ Credit Card နှင့်ဘဲပါတယ်ဆိုတာဘဲ?
အဲ! နောက်ပြီးကိုယ်မှာရှိတဲ့မလိုတော့တဲ့စာအုပ်အဟောင်းတွေကိုလဲ ပြန်ရောင်းလို့တယ်နော်! မမေ့ပါနှင့်?
စာအုပ်ဈေးတွေကတော့ အသစ်ဈေးနှင့် အဟောင်းဈေးဆိုပြီး ၂ မျိုးရှိပါတယ်၊ အဟောင်းတွေဆိုပေမဲ့ တော်တော်ကို သစ်လွင်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်၊ ဆုတ်ပြတ်နေတာမရှိပါဘူး ဆိုတာဘဲ! ရောင်းဈေးတွေက သူဟာသူ ဈေးချပြီးရောင်းပေးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်၊
Money Saving Tips from FreeShipping.org Using coupon codes and free shipping offers on your everyday purchases is just the tip of the money-saving iceberg. When you want to dig deeper into the ways you can keep more cash in your pocket, just read throughafew of the posts below. The FreeShipping.org Blog is filled with helpful tips and tricks for cutting costs on everything from groceries to gifts.
>>>Cheaply book! © Copyright:www.freeshipping.org
Better World Books Free Shipping Codes Find fabulous savings while helpingaworld cause with Better World Books free shipping. Better World Books is an online book merchant that collects and sells an extensive selection of titles. Every book you buy at BetterWorldBooks.com helps fund literacy initiatives worldwide. Browse below for free shipping or coupon codes to apply at checkout.
ဒါကစကာင်္ပူက စာအုပ်အဟောင်းဈေးကွက်နေရာနှင့် Websiteတွေဘဲ….
Shopping for used books at the Bras Basah Complex
Whilearecent post about whether Singapore is an expensive city concluded witharesounding yes, one exception is used books. The supply of used English-language books greatly outweighs the demand (thanks iPhones!) which translates to dirt-cheap prices — from S$2abook.
Used books: the only thing not cheaper in Thailand.
While you won’t findacheap bookstore in any of the shiny malls on Orchard Road, you don’t need to go too far out of your way to find this good deal– the best of Singapore’s used bookstores are clustered in the Bras Basah Complex near the Raffles Hotel. It seems like oddly prime real estate for just books, but this area wasatraditional location for book shops and the address stuck.
By my count the Bras Basah Complex is home to at least 20 bookstores. Most sellamix of new and used books, but my top pick for used fiction is Evernew Bookstore on the ground level where you can get3books for S$5. With prices that low you’d assume they’re crap books no one wants, but I’ve found everything from Kurt Vonnegut to Bill Bryson to Shakespeare in the ‘bargain bin’ and always in very good condition.
The Bras Basah bookstores also sell used children’s books, magazines, textbooks, art books, graphic novels, and travel guides. My most recent find wasaused but current edition of Lonely Planet Japan for just S$19.90 – the full price was S$55!
If you needabreak from the book shelves the Bras Basah Complex also has stationery stores, jewellery shops, an internet cafe, hair salons, money changers, andacheap food court. It’safive-minute walk from City Hall, Bugis, or Bras Basah MRT stations.
If you can read it, you can buy it here.
231 Bain Street (between Victoria Street and North Bridge Road)
Open: 10:00–21:00 (hours vary by shop)
Posted by asnthanhan under နည်းပညာ, ပညာရေး
Thursday, 29 March 2012 07:51- တင်ညွန့်
နာမည်ကျော်တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ ဘာတွေသင်နေတယ်၊ ဘယ်လိုတွေသင်နေတယ် ဆိုတာတွေကို အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါပြီ။ အဲဒီတက္ကသိုလ်ကြီးတွေက သူတို့သင်ကြားမှုတွေကို အင်တာနက်ကနေ အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့ အစီအစဉ်ကို OCW (OpenCourseWare) လို့ ခေါ်တယ်။ တက္ကသိုလ်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်လာတာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်ကတည်းက လို့ပြောရမယ်။ ဂျာမနီက Tubingen တက္ကသိုလ်က ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာတွေကို အွန်လိုင်းကနေ အဲဒီအချိန်ကတည်းက လွှင့်ထုတ်နေပြီ။
၂၀၀၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ MIT တက္ကသိုလ်ကနေ OCW ဆိုပြီးစတင် လွှင့်တင်ထားတယ်။ အလားတူ Yale, Machigan တက္ကသိုလ်နဲ့ California Berkely တက္ကသိုလ်တွေမှာလည်း OCW စနစ်ကို ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ MIT က အကူအညီတွေ အများကြီးပေးခဲ့တယ်။
MIT အနေနဲ့ OCW နောက်မှာ ရပ်တည်နေရတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ပညာရှာမှီးလိုသူတွေ အွန်လိုင်း ကတစ်ဆင့် ပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်။ အွန်လိုင်းမှာ မိမိသိချင်တာ၊ တတ်ချင်တာကို ရှာဖွေလေ့လာနိုင်ခြင်းဖြင့် မိမိလက်ရှိ သင်ကြားနေတဲ့ ပညာရေးကို အထောက်အကူ ပြုစေရန်ဆိုတာ MIT ရဲ့ OCW အပေါ်ထား တဲ့ စေတနာလို့ပဲဆိုရမယ်။ နောက်ပိုင်း MIT ရဲ့ ပုံစံအတိုင်း တက္ကသိုလ်အတော်များများက အတုယူပြီး လိုက်လုပ်လာပါတယ်။ အဲဒီလို အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ပညာရှာနိုင်ဖို့ OCW လုပ်ငန်းတွေကို William and Flora Hewlett Foundation ကနေ အထောက်အကူ ပေးနေတယ်။
ပညာရေးမှာ နည်းပညာက အများကြီး အထောက်အကူတွေပေးလာတယ်။ ပညာသင်ကြားရေးမှာ သတင်း အချက်ရရှိရေးဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ်မှာ အင်တာနက်ဆိုတာ သတင်းအချက်အလက် အများဆုံးရရှိနိုင်တဲ့၊ အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်တဲ့နေရာတစ်နေရာဖြစ်တယ်။ ဟားဗတ်နဲ့ MIT တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ တံခါးတွေဖွင့်ထားတာကြောင့် ဝင်သွားဖို့ သိပ်မခက်တော့ပါဘူး။
ပညာရေးဆိုတာ စာသင်ခန်းထဲမှာ ပိတ်လှောင်ထားပြီး “ကျက်မှတ်သင်အံ” ဆိုတဲ့ အဆင့်ကနေ အင်တာနက် မှာ “တွေ့မြင်ခံစား လက်တွေ့လေ့လာ” ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာတယ်။ အသိဉာဏ်တံခါးကို ဖွင့်သူတွေက ဖွင့်လိုက်တယ်။ သတ္တိရှိရှိ ဝင်ရဲဖို့လိုတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိတယ် အဲဒီ တံခါးဆီကို အရောက်သွားရမယ်။ စေ့ထား တဲ့တံခါးကို တွန်းဖွင့်ရဲရမယ်။
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး OCW တံခါးပေါက် ၁၅ နေရာကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
MIT ဆိုတာ Massachusetts Institute of Technology ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး OCW စာရင်းမှာပါတယ်။ ခေတ်ဦးကိုမီခဲ့တာကြောင့် စုဆောင်းထားသမျှ အတော်လေးစုံတယ်။ ခုမှ စတင်လေ့ လာချင်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာ တစ်ခုအနေနဲ့ ညွှန်းချင်တယ်။
Audio နဲ့ video ဖိုင်တွေ အများကြီးတင်ထားပေးတယ်။ သင်ကြားပို့ချချက်ပေါင်း ၃၅၀၀၀၀ လောက်ရှိတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ Standford နဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်က ပို့ချမှုတွေပါ ရနိုင်တယ်။
အွန်လိုင်းအသံလွှင့်ပို့ချချက် (webcasts) တွေကို အများကြီးတင်ထားပေးတယ်။ ရိုးရိုး ပုံမှန် သင်ရိုးတွေအပြင်၊ အထူးပို့ချချက်တွေလည်း ထည့်သွင်းထားတယ်။
4. The Open University
ဗြိတိန်အခြေစိုက် အွန်လိုင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုပါ။ ရွေးချယ်စရာတွေများတယ်။ စိတ်ပညာကနေ ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်အထိ စိတ်ဝင်စားဖွယ် ပို့ချချက်တွေရှိတယ်။
တရားဝင် ပို့ချချက်တွေကိုပဲတင်ထားတယ်။ မဟုတ်တရုတ် ဗီဒီယိုတွေ၊ အသံလွှင့်ချက်တွေလုံးဝ မတင်ထား ဘူး။ ပို့ချချက်တွေမှာ UCLA, Standford, Purdue, Auburn စတဲ့ နာမည်ကျော် တက္ကသိုလ် ကြီးတွေပါတယ်။
နောက်ပိုင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ ခေတ်မီအတိုးတက်ဆုံး site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ၊ အတွေး အမြင်ပေါင်းစုံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗီဒီယိုဆွေးနွေးချက် သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးတင်ထားတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း တွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ဒီ site ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အထောက် အပံ့အများဆုံး ပေးနေသူကတော့ ဘေ ဂိတ်စ် ဖြစ်တယ်။
Rice တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပို့ချချက်တွေကို စုဆောင်းတင်ပြပေးထားတယ်။ ဘာသာရပ်မျိုးစုံကို လေ့လာနိုင်တယ်။ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဘာသာရပ်၊ ကိုယ်လေ့လာသုတေသနပြုထားတာတွေကိုလည်း သူတို့ဆီကတစ်ဆင့် share ပြန်လုပ်နိုင်တယ်။
8. Columbia Interactive
ဒီ site ထဲကို ဝင်လိုက်ရင် တက္ကသိုလ်ပညာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ သင်ပေးနေတဲ့ ပို့ချချက်တွေ၊ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံဆွေးနွေးချက်တွေ၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကို စုံလင်အောင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် အများကြီးအထောက်အကူ ပေးနိုင်တယ်။
9. John Hopkins University Bloomberg School of Public Health
ကျန်းမာရေးနဲ့ ဆေးပညာဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ဒီ site ကအများကြီး အထောက် အကူပေးနိုင်တယ်။
Harvard တက္ကသိုလ်ကနေ အခြား လူချမ်းသာ သားသမီးတွေတက်တဲ့ ကျောင်းတွေအတွက် အထူး စီစဉ်ပေးထားတဲ့ သင်ကြားပို့ချချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အရေအတွက်ထက် အရည်အချင်းကို ဦးစားပေးထားတာ ကြောင့် များများစားစားတော့ တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကောင်းတဲ့ ပို့ချချက်တွေပါ။
အွန်လိုင်းသင်ခန်းစာ အတော်များများကို စုဆောင်းတင်ပြထားတယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ထူးခြားတဲ့ ဟောပြော ပို့ချချက်တွေကို ဒီမှာ လေ့လာနိုင်တယ်။
တကယ့်ကို ထူးထူးခြားခြား စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ အခမဲ့ အသံဖိုင်၊ ဗီဒီယိုဖိုင် ပို့ချချက်တွေကိုရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာစကားမျိုးစုံနဲ့ ရရှိနိုင်အောင်လည်း စီစဉ်ပေးထားတယ်။ ပြင်သစ်၊ စပိန်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ တရုတ် ဘာသာတွေနဲ့ လေ့လာနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။
ဆိုရှယ်ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် သင်ယူမှု ဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်ထားတဲ့ site တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ကမ္ဘာအနှံ့ သင်ကြားပို့ချချက်တွေကို ရရှိနိုင်တယ်။ အခမဲ့အွန်လိုင်းအတော်များများနဲ့လည်း ချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။
14. OCW Consortium
အွန်လိုင်းပို့ချချက်အတော်များများကို တင်ထားပေးတယ်။ အကောင်းဆုံးကျောင်းတွေက၊ အတော်ဆုံး ဆရာတွေရဲ့ သင်ကြားမှုတွေကို လေ့လာနိုင်တယ်။
15. Open Culture
ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်တွေကို အခမဲ့ရနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတယ်။ အသံဖိုင်တွေ၊ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေ၊ ရေဒီယို အသံလွှင့်ချက်တွေကို အများကြီးရနိုင်တယ်။
Posted by asnthanhan under စီးပွားရေး, ပညာရေး
မချာရဲ့ဗဟုသုတ ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးမှ ဘိန်းပန်းလေးတွေ လှသတလောက်အဆိပ်လဲပြင်းတဲ့ဘိန်အကြောင်းလေးပါ..စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလွန်းလို့ကူးယူဖော်ပြလိုက်တာပါ—-
ငရဲပန်းတို့ရဲ့ အလယ်မှာ –nday, February 27, 2012
တောင်စဉ်အထပ်ထပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် ငရဲပန်းလို့ခေါ်တဲ့ ဘိန်းစိုက်ခင်းတွေကို ကျွန်မ ရောက်သွား တဲ့ အချိန်မှာ အချို့ခြံတွေက အပွင့်တွေပွင့်ရုံမက အသီးပါ သီးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ ဘိန်းခင်းတွေ ဟာ အများအားဖြင့် အပွင့်အဖြူရောင်တွေ များပါတယ်။ အပင် စိမ်းစိမ်း အပွင့် အဖြူဖြူလေးတွေဟာ ကြည့်ရတာ မျက်စိပသာဒ အလွန်ရှိလှပါတယ်။ ဘိန်းပင်ပေါက်ကာစ အပင်ပေါက်လေးတွေကို မုန်ညင်းလို ဟင်းချိုချက်သောက်ရင် အလွန်ချိုတယ်လို့ ချက်စားဖူးသူတွေ ပြောသံကြားဖူးလို့ အပင်ပေါက်လေးတွေ များ တွေ့မလား လိုက်ရှာပေမဲ့ အားလုံးဟာ အပင်ကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် မချောတစ်ယောက် ဟင်းချက်စားဖို့ ဘိန်းပင်ပေါက်လေးတွေ ခူးမလာခဲ့ရပါဘူး။ 🙂 ကင်မရာတစ်လက်နဲ့ ဘိန်းခင်းနား ကို ယောင်လည်လည် လုပ်နေတဲ့ ကျွန်မကို မသိသူတွေကတော့ ဘာလိုလို ထင်နေကြပါလိမ့်မယ်။ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ကျွန်မဟာ ခြံတစ်ခြံကို အနားကပ်သွားပြီး လှလှ ပပ ဖူးပွင့်နေတဲ့ ပန်းကလေးတွေကို ဓာတ်ပုံ ရိုက်မိပါတယ်။ အဲဒီခြံမှာ လူရိပ်လူခြေတော့ မတွေ့ရပါဘူး။ အပင်တွေကလည်း အပွင့်ဖြူဖြူ လေးတွေသာ ရှိပါသေးတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်နေရင်း လူရိပ် လူခြေများတွေ့လေ မလားလို့ ရှာကြည့်မိ ပါတယ်။ တွေ့ခဲ့ရင် ကျွန်မ မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ရှိတာကြောင့် အခင်းပိုင်ရှင် (သို့) ခြံစောင့်ကို လိုက်ရှာမိတာပါ။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်မှ မတွေ့တဲ့ အဆုံး ဓာတ်ပုံ ရိုက်ပြီးနောက် အခြားသော ခြံဘက်ကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပါ… ဘိန်းပင်ရဲ့ ပင်စည်ပေါ်ရှိ အကိုင်းရဲ့ အရွက်ရင်းနေရာကို ဓားပါးပါး ချွန်ချွန်လေး တစ်လက်နဲ့ လှီးခြစ်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ပင်စည်ပေါ်မှာ မခြစ်ရပါဘူး.. ပင်စည်ကို ခြစ်လိုက်ရင် အစေးထွက်လာပေမဲ့ အပင်က ဝါလာပြီး သေသွားတတ်ပါတယ်။ ခုလို ပင်စည်မဟုတ်တဲ့ အရွက်လေးတွေရဲ့ အရင်းကို ချွန်ချွန်ပါးပါး ဓားအဖျားလေးနဲ့ ခြစ်လိုက်ရင်လည်း အစေးတွေ ထွက်လာပါတော့တယ်။
Information Technology Professional Examination Council (ITPEC) ဆိုတာ ဘာလဲ-
၁။ ITPEC ဆိုတာ ဘာလဲ?
ITPEC = Information Technology Professional Examination Council မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် အဖွဲ့ဝင် (၇) နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ IT Professional ဆိုင်ရာ Skill များ သတ်မှတ်ပြီး စာမေးပွဲများ စစ်ဆေးပေးတဲ့ အဖွဲ့အစည်းပါ။
ITPEC မှာ မြန်မာနိုင်ငံက MCF (မြန်မာနိုင်ငံ ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်)၊ မလေးရှားက (METEOR)၊ မွန်ဂိုလီးယားက (NITP)၊ ထိုင်းက (NECTEC)၊ ဂျပန်က(IPA)၊ ဗီယက်နမ်က (VITEC)၊ ဖိလစ်ပိုင်က (PhiINITS) စတဲ့ အဖွဲ့တွေပါဝင်ပါတယ်။
၂။ ITPEC Exam ဆိုတာ ဘာလဲ?
ITPEC က စစ်ဆေးတဲ့ စာမေးပွဲတွေပါ။ Exam Category (၁၄) မျိုး ရှိပါတယ်။
1) An: Systems Analyst Examination
2) PM: Project Manager Examination
3) AE: Application Systems Engineer Examination
4) SW: Software Design & Development Engineer Examination
5) NW: Network Systems Engineer Examination
6) DB: Database Systems Engineer Examination
7) SM: Systems Management Engineer Examination
8) ES: Embedded Systems Development Engineer Examination
9) SV: Information Security Engineer Examination
10) SU: Information Systems Security Administrator Examination
11) SD: Senior Systems Administrator Examination
12) AD: Systems Administrator Examination
13) AU: Systems Auditor Examination
14) FE: Fundamental Information Technology Engineer Examination
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပေးတဲ့ စာမေးပွဲက FE (Fundamental InformationTechnology Engineer) ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးမှာ တစ်ပြိုင်နက် စာမေးပွဲကျင်းပစစ်ဆေးပါတယ်။
နှစ်စဉ် April နှင့် October လတွေမှာ စစ်ဆေးပါတယ်။ FE စာမေးပွဲစစ်ဆေးချိန်က စုစုပေါင်း (၅) နာရီဖြစ်ပါတယ်။ နံနက်ပိုင်းမေးခွန်းက (၂)နာရီ (၃၀) မိနစ်။ ညနေပိုင်း မေးခွန်းက (၂) နာရီ (၃၀) မိနစ်။
မေးခွန်းအားလုံး MUltiple Choice Question တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စာမေးပွဲဖြေဆို အောင်မြင်ပြီး လက်မှတ်ရရင် ဘယ်လိုအကျိုးရှိမှာလဲ?
(၁) မိမိ၏ အိုင်တီဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုကို စစ်ဆေးမှတ်ကျောက်တင်ပြီးသား ဖြစ်ခြင်း။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ IPA (Information-technology Promotion Agency)ဆိုတဲ့အဖွဲ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အောက်မှာ JITEC က ITEE (Information-Technology Engineers Examination) တွေကို စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ Standard Skill များ ပြုစုခြင်းမှ အစ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
အဲဒီစာမေးပွဲတွေနဲ့ လက်မှတ်တွေကို အထက်တွင် ဖော်ပြထားသော ITPEC အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအပြင် ကျန်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတော်တော်များများကလည်းသဘောကျလက်ခံကြပြီးသူတို့နဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ITPEC-(FE) စာမေးပွဲအောင်ပြီး လက်မှတ်ကိုင်ထားနိုင်ရင် မိမိ၏အိုင်တီဆိုင်ရာ အခြေခံအဆင့် အရည်အချင်းကို နိုင်ငံတကာ ‘စံ’တစ်ခုနဲ့ မှတ်ကျောက်တင်ပြီးသား ဖြစ်ပါမယ်။
(၂) အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ Cross Certification ဖြစ်ခြင်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြေဆိုအောင်မြင်တဲ့ ITPECFE စာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်ကိုကျန်နိုင်ငံများကပါ အသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက် အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ အိုင်တီအလုပ်တွေ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာ ပညာသင်ယူမှုတွေ၊ အိုင်တီဆိုင်ရာScholarship လျှောက်တာ တွေစတဲ့ ကိစ္စတွေမှာ များစွာ အထောက်အကူပြုမှာဖြစ်ပါတယ်
၄။ ITEPC စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အရည်အချင်းကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလားအရည်အချင်း ကန့်သတ်မှုမရှိပါ။ သို့သော်လည်း အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ပြီးသူများ ဖြေဆိုရန် အကြံပြုပါသည်။ ITPECကို IT ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုလိုသူများ၊ ကွန်ပျူတာနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ၊ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရလိုသူများ ဖြေဆိုခြင်းဖြင့်အကျိုးအများဆုံး
၅။ စာမေးပွဲဖြေဖို့ ဘာတွေလေ့လာထားရမလဲ…..
2) Information Processing and Security
3) System Development
4) System Operations and Maintenance
5) Internal Design and Programming
6) Network Technology
7) Database Technlogy Current IT Topics (Applications) စသည့် ဘာသာရပ်များကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် လေ့လာထားရပါမည်။ စာမေးပွဲကို Englishဘာသာဖြင့် စစ်ဆေးပါမည်။
၆။ စာမေးပွဲဖြေဆိုရန် မည်သို့ ဆက်သွယ်ဖြေဆိုရမည်နည်း?
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွန်ပျူတာအသင်းချုပ်ကို ဆက်သွယ်ရပါမည်။ ရန်ကုန်မှဖြေဆိုသူများအတွက် စာစစ်ဌာနကို မြန်မာအင်ဖိုတက်ခ်တွင် စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပြီးပြည်နယ်နှင့်တိုင်းများမှ ဖြေဆိုသူများကို သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်း ကွန်ပျူတာအသင်းများမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်စစ်ဆေးပါမည်။ စာမေးပွဲကြေးမှာ
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ (၄) ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဖြေရသောစာမေးပွဲကြေး ကတော့ ၁၀၀၀၀ိ/- ကျပ်ဟု သိရပါသည်။
၇။ ၀င်ရောက်လေ့လာဖတ်ရှုသင့်သော ၀က်ဘ်ဆိုက်များမှာ –
PhiNITS(the Philippines) (http://www.philnits.org)
NECTEC (Thailand) (http://www.ite.nectec.or.th)
တို့တွင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သိရသလောက် ပြန်လည်ရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတော့တယ်။